Musharax Maxamed Yasin oo Nairobi kulan qado ah kula yeeshay waxgarad +Sawiro – SBC
Musharax Maxamed Yasin oo Nairobi kulan qado ah kula yeeshay waxgarad +Sawiro
Xaaji Maxamed Yaasin oo ah Musharax u taagan jagada madaxweynaha Soomaaliya ayaa manta qado sharaf ugu sameeyey magaalada Nairobi Odayaal & waxgarad Soomaaliyeed oo ku sagan wadanka Kenya.
Kulankan oo ujeedadiisu aheyd mid Musharaxu uu ku doonayo in uu ku helo kalsoonida cuqaasha dhaqanka ayaa sidoo kale wuxuu uga gol lahaa inuu uga warbixyo Issimadaasi qorshihiisa musharxnimada madaxtinimada Soomaaliya.
Ugaas Maxamud Xuseen Baqow oo ka Mid ahaa Isimadii Qado Sharaftaasi loo sameeyay oo Goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin sida wanaagsan ee munaasibadan Loo soo agaasimay, Ugaaska ayaa xusay inay taageersanyihiin ka Isimo ahaan Loolanka Musharax Maxamed Yaasiin uu ugu Jiro madaxtinimada Soomaaliya isla markaana ay Garab taaganyihiin.
Ugaaska ayaa la dar daarmay Musharax Maxamed Yaasiin uguna Baaqay hadii uu ku Guulaysto Korsigaasi inuu umada Somaliyeed dibu Hashiisiin dhex dhigo oo uu cadaalad ka shaqeeyo.
Musharax Xaaji Maxamed Yaasiin oo Hadalka Lagu soo dhaweeyay ayaa sheegay inuu aad ugaga Mahadnaqayo dhamaan Isimada iyo Aqoonyahanka soo Ajiibay Munaasibadan Maanta.
Musharaxa ayaa aad uga hadlay waxyaalaha ku dhaliyay inuu xiligan xilka madaxtnimiada Soomaaliya quudareeyo, waxaana uu ku tilmaamay inuu fursad wanaagsan u arko ka soo bixitaanka xilkaasi isla markaana uu umada Soomaaliyeed bad baadin karo.
Xaaji Maxamed Yaasiin waxa uu ka Codsaday Isimada inay taageero siiyaan isla markaana ay la shaqeeyaan hadii ILAAH guuleeyo xilkaasi wayn ee Madaxtinimada Somaliyeed.
Xaajiga oo ka hadlayey waxyaabaha u qorshaysan in uu qabanayo hadii dalka madaxtinimadiisa uu ku guuleysto wuxuu sheegay in uu dalka ku maamuli doono shareecada Islaamka, isagoo xusey in isagu uu wato Kibaabka qur’aanka kariimka.
” Nin baa oranaya waxaa i wata Mareykan, mid kale ayaa oranaya waxaa i wata qolo hebel, laakiin anigu waxaan wataa waa Kitaabka qur’aanka kariimka, kaasi ayaan wataa oo aan doonayaa inaan dalka ku maamulo” ayuu yiri Maxamed Yaasin oo jeebka kala soo baxay Kibaabka qur’aanka kariimka.
Xaaji Maxamed Yaasin wuxuu sheegay inay ka go’an tahay in uu dalka ku soo celiyo nidaam iyo kala dambeyn salka ku haya shareecada Islaamka isagoo muujiyey inaanu dalka xilkiisa ugu sareeya u raadineyn in uu wax ka helo, balse uu doonayo in uu u wax qabto.
“60 sano ayaan jiraa, intii aan dhali lahaa waan dhaley, 17 caruur ah ayaan dhaley, 3 xaas ayaan leeyahay, wixii aan heli lahaa waan helay, 32 sano ayaan mucaarad ahaa, haatan waxaan raadinayaa inaan ILAAH hortiis dalkeyga iyo dadkeyga wax u qabto oo aan si daacad ah u doonayaa inaan shareecada Islaamka ku xukumo” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Xaaji Maxamed Yaasin.
Musharax Maxamaed Yaasin oo ah ganacsade weyn oo si weyn loo yaqaan Soomaaliya ayaa loolankiisa musharaxnimada si weyn looga dareemayaa magaalada Nairobi, iyadoo dad badan ay aad u soo dhaweeyeen ololihiisa musharxanimo, iyagoo ku tilmaamay shakhsi wax weyn ka badali kara xaalada Soomaaliya.
Sawir qaade: Jaamac Fayte